Accueil > Gazetin'ny nosy > Governemanta : Vola ve sa traikefa sy fahaizana ?
Governemanta : Vola ve sa traikefa sy fahaizana ?
Efa mandeha sahady ny fanaterana CV ao amin’ny lehiben’ny mpanohana sy lohandohany amin’ny fampandaniana an’i Andry Rajoelina ao Fianarantsoa. Efa ampolony maro ireo olona any no milahatra hiady toerana ao amin’ny governemanta izay hotarihin’ingahy Andry Nirina Rajoelina hatramin’izao. Tsy ny olona mpomba sy nampandany azy ihany no tonga midodododo manantona fa hatramin’ireo izay nanenjika azy tamin’ny fifidianana iny dia mihazakazaka avokoa.
Tsy ny any Fianarantsoa ihany koa no nahazoana vaovao fa ny avy any Antsiranana, izay miantso aty Antananarivo amin’ny olona izay heverin’izy ireo fa mifandray mivantana amin’ity filoham-pirenena vaovao ity. Tsy sivily ihany no manao izany fa hatramin’ny manamboninahitra miaramila sy zandary izay avy any amin’ny faritany iny koa, nefa mipetraka eto Antananarivo.
Efa tsy hay tenenina intsony ny fivoriana isan-karazany etsy sy eroa amin’ny alalan’ny fikambanana izay nilaza fa nanohana an’i Andry Rajoelina amin’ny fahalaniany izao eto Antananarivo. Tsy tenenina intsony ny ady toerana ao amin’ny Arena Ivandry. Manao ny tery vay manta ihany koa ireo mpifindra monina avy any ivelany izay tonga niverina hitady asa indray eto Madagasikara amin’izao fotoana izao. Ireo ilay antsoina amin’ny fiteny mahazatra hoe “diaspora”. Ahitana ny tsy manan’asa sy ireo mpanao asa an-tselika tany ivelany ka leo izany dia hanonitra ny fahoriana nahazo tany ka mieritreritra ny hitondra eto Madagasikara indray.
Misy koa ireo izay mpitanty ràn-kena ka rehefa tsy nahazo toerana intsony ny olona notohanany nandritra ny dimy taona teto Madagasikara dia nivadika nanohana an’i Andry Rajoelina indray. Fantatra avokoa izy ireny ary efa nalefa teto ny anarany teo aloha teo ary mbola misy maro hafa koa izay mbola horesahina aoriana kely ao. Tsy miraharaha izay fampandrosoana an’i Madagasikara sy ny firenena izy ireny fa tonga hiaro ny tombotsoany manokana sy ny aferafera ataony fotsiny sy ny trafika maloto iainany. Tena nandany vola sy harena izy ireny tamin’ny fampandaniana an-dRajoelina noho ireo antony voalaza teo ambony ireo.
Mbola misy koa nefa ireo tena mpitolona niaritra ny mafy tao amin’ny TGV sy ny Mapar hatramin’izay ka rariny sy hitsiny raha toa ka miady toerana izy ireny satria tompony. Ireo no tena sahirana ankehitriny satria tsy manam-bola ka ahiana mafy ny haha voailika azy. Efa hita taratra izany satria manomboka ny fanilikilihana.
Tsy izany ihany koa no mbola miady toerana fa ao koa ireo mpandraharaha nanohana tamin’ny alalan’ny volany sy ny fanomezana hafa maro. Tsy mba nisehoseho izy ireny ary tsy mba naira-nivory tamin’ny be sy ny maro ka sarotra ny tena namantatra azy.
Ireo rehetra ireo izao no santionany amin’ireo mpiady toerana ao amin’ny fanjakana vaovao ity.
Hanomboka tsy ho ela ny fisehoana amin’ny haino aman-jery hataon’izy ireny. Hilaza ny atsanga tsy aman’orana isan-karazany izao. Hatramin’ny fanerena an-kolaka aza dia arangarangan’izy ireny. Fitaovana mahomby amin’izany ny raharaham-paritra sy ny fihaviana.
An’i Andry Nirina Rajoelina ny teny farany ary izy no mahalala ny tokony hataony amin’ity raharaha fanendrena olona ity. Enga anie ka mba tsy hanao toa ny nataon’ny fanjakana Hery Rajaonarimampianina izay nodimbiasany amin’ny fanendrena olona ho mpitondra ambony teto amin’ny firenena ny tenany. Nalaza dia nalaza tokoa ny resaka “malety” na ny fandoavana vola be vao mahazo toerana. Nalaza tamin’izany i Ramatoa Voahangy Rajaonarimampianina vadiny. Naongana hatramin’ny praiminisitra avy rehefa tsy mety nandoa vola. Nitohy hatrany amin’ny fanendrena mpiasam-panjakana ambony izany fomba izany ka nahatonga ny risoriso teo amin’ny fanadinam-panjakana maro isan-karazany. Miliara ariary no vola naloa raha te ho minisitra. Nalaza izany ary maro no nanaporofo. Tsy afaka miditra ho mpiasam-panjakana ambony raha tsy manana 50 tapitrisa ariary raha kely indrindra. Ny fanadinam-panjakana rehetra dia naloa vola avokoa ka izay mpanam-bola ihany no afaka ary nitondra an’i Madagasikara teo aloha teo. Porofo mbola mitohaka amin’ny tenda ny mbola nanafoanana ny fifaninanana hidirana mpitsara na “magistrat” farany teo iny.
Miankina amin’ny olona hotendren’ingahy Andry Nirina Rajoelina eo no hahitana taratra ny mety hoavin’i Madagsikara sy ho avin’ny fitondrany. Ny maso tsy mba mandainga hoy ny fitenenana ka hiara-hahita ny olona izay hiara-miasa aminy akaiky isika hahazoana mitsara avy hatrany ny fitondrana hoavy eo.
Manantena fitantanana tsara amin’ingahy Andry Nirina Rajoelina ny vahoaka Malagasy rehetra ka mba tsy ny vola no hanjaka fa olona manana traikefa sy manam-pahaizana ka ho afaka hanarina izao firenena latsaka an-katerena izao.